radiomirmire.com.np Nepal s No 1 radio Portal Breaking, National, World, Business, Sports Entertainment News With Multimedia and Photogallery
जित्नुको मज्जा बेग्लै
युरोकप फुटबलको उपाधिका साथ स्पेनका फुटबल खेलाडिहरु । फाइनलमा स्पेनले इटालीलाई ४–० ले पराजित गर्‍यो । डेभिड सिल्भा, जोर्डी अल्बा, फर्नाण्डो टोरेस र जुवान माटाले गोल गरे ।
इच्छुक प्रतिष्ठानको भवन सिलान्यास:
काठमाडौको घट्टेकुलोमा इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको भवन सिलान्यास कार्यक्रममा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण ।
१४ औं युरोकपको सेमी फाइनलको खेलमा जर्मनी विरुद्ध दुई गोल गरी हौसिएका इटाली खेलाडी मारियो बालोटेलीले मैदानमै टिसर्ट फुकालेर उफ्रदै । मैदानमा टिसर्ट खोलेपछि बालोटेलीले पहेलो कार्ड पाएका थिए ।
हो हो माले हो हो :
पाल्पाको तानसेन नगरपालिका नजिकैको तेल्घा गाविसमा धान रोप्नको लागि दादे (खोक) लगाउदै किसान । तस्विर सौजन्य: टेकनारायण भट्टराई ।
छुपु मा छुपु :
नवौं धान दिवसको अवसर पारेर ललितपुरको खुमलटारमा नेपाल कृषी अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले आयोजना गरेको रोपाई महोत्सवमा धान रोप्दै रोपाहारहरु ।
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको पहिलो बैठक सम्पन्न ( बिज्ञप्ती सहित)
काठमाण्डौं, २१ असार । नेकपा–माओवादी निकट पत्रकारहरुको संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको पहिलो वैठकले ४१ सदस्य केन्द्रिय सचिवालय गठन गरेको छ । बुधबार सम्पन्न क्रान्तिकारी पत्रकार संघको राष्ट्रिय भेलाले संगठनको विधान ...
दोस्रो डिभिजनमा भर्ना छनौट प्रकृया अवरुद्ध
काठमाडौं, २१ असार । बुधवारदेखि शुरु भएको समायोजनको विकल्प रोजेका माओवादी लडाकुहरुको भर्ना छनौट प्रकृया सिन्धुलीको दुधौलीमा अवरुद्ध भएको छ । छनौट प्रक्रिया अन्र्तगत नेपाली सेनाको मापदण्ड भन्दै उमेर, छाती नाप्ने ...
बजेट अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्न कोइरालाको आग्रह
काठमाडौं, २१ असार । नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले सरकारले ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपति रामवरण यादव आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेशबारे छलफल गर्न ...
प्रहरीको गोली लागी एकको मृत्यु
काठमाडौं, २१ असार । रौतहटमा स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप हुादा एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउादा स्थानिय लक्ष्मीपुर ६ का रमुदप्रसाद जैसवालको मृत्यु भएको ...
समायोजनका प्रकृया सात वटै शिवीरमा सुरु हुदै
काठमाडौं, २१ असार । समायोजनको विकल्प रोजेका माओवादी लडाकुहरुको छनौट प्रकृया आज वाट देशका सातवटै शिवीरमा सुरु हुादै छ । समितिका सदस्यहरु पुग्न ढिलाई भएकाले वुधवार तीन ओटा शिवीरमा ...
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ गठन
काठमाण्डौं, २० असार । नेकपा–माओवादी निकट पत्रकारहरुको संगठन क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको पहिलो वैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्दै छ । ललितपुरको कुपण्डोलमा जारी वैठकले केन्द्रीय सचिवालय गठन ...
जनजाति महासंघको पनि छुट्टै पार्टी हुने
चेम्बर अफ कमर्शको टोलीले कोइरालालाई भेट्दै भेटवार्तामा
संशोधनवादसग सम्बन्ध विच्छेद जरुरी: थापा
लडाकुलाई सेनामा भर्ती अभियान शुरु
अध्यादेशबाट बजेट जारी नगर्न आग्रह
पोखरीमा डुवेर चार बालबालिकाको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीको अर्को राष्ट्रघाती काम/विमानस्थल भारतलाई
माओवादी लडाकुको समायोजनको प्रकृया शुरु
बजेटबारे सरकार छलफलमा व्यस्त
सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच कुरा मिलेन
जापानको फुकुसिमा आणविक केन्द्र सम्बन्धि प्रतिवेदन आज सार्वजानिक हुादै
एजेन्सी ,२१ असार । जापानमा गत वर्ष फुकुसिमा आणविक केन्द्रमा भएको क्षतिका बारेमा संसदीय जााच समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दैछ । यस अघि समितिले दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाओतो कानले ...
मेक्सिकोमा पुन: मतगणना गरिदैं
एजेन्सी, २१ असार । मेक्सिकोको निर्वाचन आयोगले गत आईतबार भएको राष्ट्रपतिय निर्वाचनको मतगणना पुन: गराईने घोषणा गरेको छ । बामपन्थी पिआरडी पार्टीका उमेद्वार एन्द्रेज् लोपेज्ले मतगणनामा धााधली भएको भन्दै पुन: मतगणनाको ...
सोमालियामा बढ्दो अनिकाल प्रति सेभ द चिल्ड्रेनको चासो
एजेन्सी ,२१ असार । सोमालियामा बढ्दै गएको भोकमरीको समस्याले लाखौं बालबालिकाले ज्यान गुमाउन सक्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनले चासो व्यक्त गरेको छ । सोमालियामा जारी द्धन्द्ध र ...
मेक्सिकोमा राष्ट्रपति निर्वाचनको पुन: मतगणना माग
विश्वको एक चर्चित औपधी कम्पनीलाई ३ अरब डलर जरिवाना
मानव अधिकार आयोगका प्रमुख नेभी पिल्लेको भनाई
राष्ट्र संघबाट ७२ करोड निकासा
काठमाडौ, १५ असार । संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको वाकी कार्यभार पूरा गर्नका लागी झण्डै ७२ करोड रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण कोष (युएनपिएफ) ...
राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना
काठमाडौ, १४ असार । सर्वसाधारणबाट वित्तीय संस्थामा सङ्कलन हुने रकम सुरक्षित गरिनुपर्ने माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ता सङ्घले बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको छ । ...
राजनितिक सहमती पछि वजेट
काठमाडौ, ६ असार । नेपाली काग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कामचलाउ सरकारले दलीय सहमति कायम गरेर मात्र पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपन छन् । आर्थिक पत्रकार ...
दुर्लभ रानीचापको व्यावसायिक खेती सुरु
खेती विस्तार हुन नसक्दा आप र लिच्चीको आयात कायमै
सशस्त्र प्रहरीले सामान नियन्त्रणमा लिएकामा विरोध
राष्ट्रिय विशेष खेलकुद आजदेखी शुरु
काठमाडौं, २१ असार । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा १७ औं विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय विशेष खेलकुद प्रतियोगिता आजदेखी सुरु भएको छ । एथलेटिक्स मात्र समावेश दुईदिने प्रतियोगितामा अहिले बिभिन्न ...
जोकोभिच, फेडेरर र मुर्रे सेमीफाइनलमा
एजेन्सी, २१ असार । बिश्व नम्बर एक नोभाक जोकोभिच र बिश्व नम्बर तीन स्वीस रोजर फेडेरर लण्डनमा जारी विम्बल्डन टेनिसको सेमीफाइनलमा प्रबेश गरेका छन । बुधबार भएको क्वाटरफाइनलमा रसियाका मिखाइल ...
सेरेना विम्बल्डनको सेमीफाइनलमा/मुर्रे अन्तिम आठमा
पल्सर स्पोर्टस अवार्ड आज
ए डिभिजन क्लबमा खेलाडी आवद्धता शुरु भयो
म निर्दोष छु, क्षतिपूर्तिसहित मानहानीको मुद्दा हाल्छु – दिक्पाल कार्की
काठमाडौं १६ आषाढ नायक तथा मोडल दिक्पाल कार्कीले आफूमाथि लगाईएको साईवर क्राईमको आरोप खण्डन गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । साईवर क्राइमको उजुरीका आधारमा १० दिनसम्मको हिरासतमा बसी धरौटीमा ...
हरिवंश आचार्यको दोस्रो विवाह रमिलासग
काठमाडौ, ८ असार । चर्चित हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यको दोस्रो दाम्पत्य जीवन सुरु भएको छ । आचार्यले बिहीबार साँझ रमिला पाठकसंग दोस्रो विवाह गर्नु भएको हो । साहित्यकार डा. रविन्द्र ...
`9 O`Clock` को स्क्रिप्ट खारेज
स्क्रिप्टमा ज्यादा अष्लिलता देखिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्ड अर्न्तगतको स्क्रिप्ट छनोट समितीले फिल्म `9 O`Clock` को स्क्रिप्ट खारेज गरिदिएको छ । सामाजिक मर्यादालाई ख्याल नगरी स्क्रिप्ट बनाईएको भन्दै ...
चलचित्र ‘आफ्नै संसार’ को रिलिज साउनमा
पार्टी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
साम्राज्यवाद–विस्तारवादको घुसपैठ, तोडफोड र घेराबन्दीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यतिबेला अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । ...
देश र जनताको रक्षार्थ हामीले विद्रोह गरेका हौँ: मोहन वैद्य किरण
 नया पार्टी गठनको औचित्यता कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने ? कम्युनिस्ट पार्टी ...
हाम्रा सहयोगी लिङ्कहरु
नयाँ जनदिशा राष्ट्रिय दैनिक
हाम्रो जलजला मासिक
Copy right © Mechi-Kali Sanchar (Pvt) Ltd., Radio Mirmire 89.4 MHz, Anamnagar, Kathmandu
Post Box: 26165, Phone: 01-4771228, Fax: 01-4770058, Email: radiomirmirenews@gmail.com
This website has visited 5195 times